Koorsooyinka - Nolosha Badeecada - Geofumadas
Koorsooyinka - Nolosha Badeecada
Autodesk Inventor Nastran waa barnaamij jilitaan tiro iyo xoog leh oo loogu talagalay dhibaatooyinka injineernimada. Nastran waa mashiinka xalka habka cunsuriga loo yaqaan, ee loo aqoonsan yahay makaanikyada qaabdhismeedka. Loomana baahna in la xuso awoodda weyn ee Inventor inoo keenay naqshad farsamo. Inta lagu guda jiro koorsadan waxaad baran doontaa socodka ...
Koorsooyinka - Naqshadeynta 3D Koorsooyinka - BIM MEP Koorsooyinka - Nolosha Badeecada Koorsooyinka Hindisaha
Kani waa koorso hordhac u ah qalabka SolidWorks iyo farsamooyinka tusaalooyinka aasaasiga ah. Waxay ku siin doontaa faham adag oo ku saabsan SolidWorks waxayna dabooli doontaa abuurista 2D sawir iyo moodooyinka 3D. Mar dambe, waxaad baran doontaa sida loogu dhoofiyo qaab loogu talagalay daabacaadda 3D. Waxaad baran doontaa: Naqshadaynta Cura3D ee daabacaadda 3d, rakibaadda ...
Koorsooyinka - Nolosha Badeecada Koorsooyinka Naqshadeynta Farsamada
CREO waa xalka 3D CAD oo kaa caawinaya inaad dardar-geliso hal-abuurka wax soo saarka si aad si dhakhso leh ugu abuuri karto alaabo ka fiican. Si fudud wax loo barto, Creo wuxuu si habsami leh kaaga qaadanayaa heerarkii ugu horreeyay ee naqshadeynta wax soo saarka iyada oo loo marayo wax soo saar iyo wixii ka baxsan. Waxaad isku dari kartaa shaqooyin awood leh oo la xaqiijiyay iyo cusub ...
Koorsooyinka - Nolosha Badeecada Koorsooyinka CREO Parametric Koorsooyinka Naqshadeynta Farsamada
Creo Parametric waa naqshadeynta, soosaarka iyo softiweeriyada barnaamijka PTC Corporation. Waa barnaamij u oggolaanaya tusaalaynta, sawir-qaadista, nashaadaadka naqshadeynta, is-weydaarsiga xogta, iyo waxyaabo kale oo ka dhigaya mid caan ka ah naqshadeeyayaasha makaanikada iyo xirfadleyaasha kale. AulaGEO wuxuu soo bandhigayaa koorsadan qaabeynta ah ee 3D ee horumarsan oo adeegsata amarrada Creo ee horumarsan ...
Creo waa xalka 3D CAD oo kaa caawinaya inaad dardar geliso ikhtiraaca wax soo saarka si aad si dhaqso leh u abuuri karto badeecooyin ka wanaagsan. Si fudud wax loo barto, Creo waxay si habsami leh kaaga qaadaysaa marxaladihii ugu horreeyay ee naqshadeynta wax soo saarka iyada oo loo marayo wax soo saar iyo wixii ka baxsan. Waxaad isku dari kartaa shaqooyin awood leh oo la xaqiijiyay iyo cusub ...
Ansys Workbench 2020 R1 Mar kale AulaGEO waxay keeneysaa dalab cusub oo tababar ah oo ku saabsan Ansys Workbench 2020 R1 - Naqshadeynta iyo jilitaanka. Koorsada, waxaad ku baran doontaa aasaaska Ansys Workbench. Laga bilaabo hordhaca, waxaan heli doonaa dib u eegis deg deg ah oo ku saabsan falanqaynta dhabta ah ee lagu dabooli doono inta lagu jiro koorsada. Waan arki doonnaa…
Koorsooyinka - Nolosha Badeecada Koorsooyinka Ansys Koorsooyinka Naqshadeynta Farsamada